Saturday January 22, 2022 - 17:27:02
Mas'uulka 2aad ee ugu sarreeya dalka Suudaan ayaa socdaal aan horay loosii shaacin ku tagay wadanka Itoobiya oo ay dagaallo sokeeye ka socdaan.
Max'med Xamdaan Daglo oo Xameeti loo yaqaan ayaa ka degay magaalada Addis Ababa halkaas oo uu kulamo kula qaatay R/wasaare Abiy Axmed iyo wasiirkiisa G/dhigga.
Ninkan oo ah ku xigeenka golaha Siyaadada oo udhigma mdaxweyne ku xigeen ayuu socdaalkiisa mugdi badan kujiraa, qoraal kasoo baxay melleteriga Suudaan ayaa lagu sheegay in socdaalku uu xambaarsanaa farriimo ku saabsan xasiloonida xuduudda labada dal.
Abiy Axmed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay soo dhoweynta Max'med Xamdaan oo uu ku sifeeyay mas'uul ka shaqeynaya arrimaha nabadda.
Suudaan iyo Itoobiya aya dhowr jeer ku dagaallamay deegaannada xuduudda dhaca gaar ahaan mandiqadda Al Fashaqah halkaas oo laga saaray melleteriga Xabashida kadib 25 sanadood oo ay xoog ku haysteen dhul beereedkan hodonka ah.